Petro Anoramba Jesu | Upenyu hwaJesu
MATEU 26:69-75 MAKO 14:66-72 RUKA 22:54-62 JOHANI 18:15-18, 25-27
Jesu paasungwa mubindu reGetsemane, vaapostora vatiza nekutya. Asi vaviri vavo havana kuenda kure. Vaviri ava ndiPetro “nomumwe mudzidzi,” uyo anofanira kuva muapostora Johani. (Johani 18:15; 19:35; 21:24) Zvimwe vanozobata vanhu vana Jesu paanenge achiendeswa kumba kwaAnasi. Anasi paanozoendesa Jesu kuMupristi Mukuru Kayafasi, Petro naJohani vanotevera vari nechekure. Vanogona kunge vari kutyira upenyu hwavo asi vachinetsekawo kuti chii chichaitika kuna Tenzi wavo.
Johani anozivikanwa nemupristi mukuru saka anopinda muchivanze cheimba yaKayafasi. Petro anosara panze ozodzoka achitorwa naJohani pashure pekunge ataura nemumwe murandasikana ari kushanda semurindi wepasuo. Petro anobva abvumirwa kupinda.
Kuri kutonhora, saka vanhu vakagara muchivanze vari kudziya moto. Petro anogarawo navo achidziya moto achimirira kuona kuti nyaya yaJesu ‘ichaguma sei.’ (Mateu 26:58) Musikana uya aita kuti Petro apinde anozonyatsomucherechedza nechiedza chemoto. Anobva ati: “Hausiwo mumwe wevadzidzi vomunhu uyu here?” (Johani 18:17) Vamwewo vanhu vanobva vamuziva votangawo kumupa mhosva yekuti aiva naJesu.—Mateu 26:69, 71-73; Mako 14:70.
Petro anotsamwa nazvo chaizvo. Haasi kuda kuzivikanwa zvokuti anotomboti sudurukei achidzokera nechekunopindwa nako. Saka Petro anoramba kuti aiva naJesu, uye anotombotaura kuti: “Handimuzivi uye handisi kunzwisisa zvauri kutaura.” (Mako 14:67, 68) Anototanga “kutuka achipika,” izvo zvinoreva kuti ari kutaura kuti kana zvinhu zvaari kutaura zvisiri zvechokwadi awirwe hake nedambudziko.—Mateu 26:74.
Izvi pazviri kuitika, dare riri kutonga Jesu riri kuenderera mberi mumba maKayafasi, zvichida mukamuri riri nechepamusoro pakatarisana nechivanze. Petro nevamwe vaainavo, avo vari nechepazasi, vanogona kunge vari kuona zvapupu zviri kupinda nekubuda zvichinopa uchapupu.
Petro anobatwa kuti kutaura kwaari kuita kuti haazivi Jesu ndekwenhema nekuti rurimi rwake rwunoratidza kuti anobva kuGarireya. Uyezve pavanhu varipo pane mumwe ane ukama naMakosi, uya adamburwa nzeve naPetro. Saka anobva ati kwaari: “Handina kukuona mumunda uinaye here?” Petro paanoramba kechitatu, jongwe rinobva rarira sezvakanga zvataurwa naJesu.—Johani 13:38; 18:26, 27.
Kunenge kuti panguva iyoyo Jesu akamira paari kuona zviri kuitika muchivanze. Ishe anobva atendeuka otarira Petro, izvo zvinobva zvaita kuti Petro arwadziwe seabaiwa nebakatwa. Anobva ayeuka kuti pavanga vari muimba yepamusoro maawa mashomanana apfuura, Jesu amuudza kuti achamuramba. Chimbofungidzira kuti Petro anonzwa sei paanoona kuti ndizvo zvaatoita. Anobuda panze onochema zvinonzwisa tsitsi.—Ruka 22:61, 62.
Asi Petro asvika sei pakuita izvozvo? Munhu aiva nechokwadi chekuti ane ukama hwakasimba naMwari kudaro, azoramba sei Tenzi wake? Mashoko ari kutaurwa nepasipo uye Jesu ari kutorwa semupari wemhosva akaipisisa. Panguva iyi ndipo paari kufanira kutsigira murume uyu asina mhosva uye waanoziva kuti ndiye ane “mashoko oupenyu husingaperi,” asi ari kutomuramba.—Johani 6:68.
Zvakaitika kuna Petro zvinoratidza kuti kunyange munhu ane kutenda uye akazvipira kuna Mwari anogona kutsvedzemuka kana asina kugadzirira miedzo inogona kungoerekana yauya. Vashumiri vese vaMwari vanofanira kudzidza pane zvakaitika kuna Petro!
Petro naJohani vanowana sei mukana wekupinda muchivanze cheimba yaKayafasi?
Petro naJohani pavanenge vari pachivanze, chii chiri kuitika mumba?
Mashoko okuti Petro anotuka nekupika anorevei?
Zvakaitika kuna Petro zvinopa chidzidzo chipi chinokosha?